Nalu uhambo lweCardi B olalelwe kakhulu i-rapper yesikhathi - Tamban RELAY
Nalu uhambo lweCardi B olalela kakhulu i-rapper yesikhathi
By brylandobe On UJul 30, 2020
Ebhokisini lombuso, uBelcalis Marlenis Almanzar. Uzalelwe eNew York ngo-Okthoba 11, 1992, eBronx, eCardi B rapper yaseMelika enomsebenzi okhazimulayo.
Ngenkathi esemusha, wayengumabheki esitolo esithengisa izimpahla, futhi owayexebula ngeminyaka eneminyaka eyi-19.
Ube esefaka iBorough yaseManhattan Community College ngaphambi kokushiya phansi, ngoba wayengeke akwazi ukubuyisana nezifundo zakhe nomsebenzi wakhe njengemicibisholo. UCardi B wayeqamba amanga kunina ngokumenza akholelwe ukuthi wenza imali yokubetha.
UCardi B waziwa ku-Instagram ngamavidiyo akhe amafushane, lapho esebenzisa khona ulimi olungenangqondo, ngaphandle kobunzima.
UCardi B waqala ukuzenzela igama emculweni ngonyaka ka-2015, ephethe nge-remix ka "Boom boomKusuka kuShaggy. Ngokungeziwe kulokho, umphakathi umthola embukisweni ongokoqobo "Uthando neHip Hop New York ”.
NgoMashi 7, 2016, wenza i-mixtape yakhe yokuqala enesihloko esithi "Umculo we-Gangsta B, vol 1 » ekhishwe ngoMashi 7, 2016. Futhi ngonyaka ofanayo wenza i-mixtape yesibili: "Umculo weGangsta B, vol 2 ”.
NgoMeyi ka-2017, waqokwa kuma-BET Awards ezigabeni ze-Best Emerging Artist kanye ne-Best Female Hip-Hop Artist, kodwa akazange anqobe noma yiziphi kulezi zindondo ezimbili.
Kepha inkazimulo yakhe yayiseduze, ngoba ngoJuni 16, 2017, wakhipha eyedwa "I-Bodak Yellow " okuqinisekiswe ukuthi kwenziwa iplatinamu amahlandla amahlanu eMelika.
Kusukela ngaleso sikhathi, uCardi B wenze uchungechunge kuphela lokufaka nezinkanyezi ezinkulu kakhulu zomculo waseMelika. Yini emtholele imiklomelo yakhe eminingi okuyi:
Umklomelo owodwa we-Grammy, ama-Seven Billboard Music Award, Ama-Guinness World Amarekhodi Amahlanu, Ama-American Music Award, Amane, Ama-MTV Video Music Award, Ama-BET Award Nemiklomelo Ye-2019 yeBET ye-BET. Futhi umklomelo we-ASCAP wokubhala izingoma zalo nyaka ngonyaka ka-XNUMX.
ICardi B ihlala iminyaka emi-3 manje elaleleka kakhulu iRapper yaseMelika ngemuva kukaNicki Minaj. Abantu abaningi bayakuthokozela ukonga izingoma ezimnandi zikaCardi. Futhi wena, uyayithanda?
Le ndatshana iqale ukuvela ku-:
Nakhu ukuthi kungani u-Amber Heard egqoka isikhafu esibomvu nsuku zonke
Uyena odlwengulwa oneminyaka engu-24 ubudala epaki, bese ekhishwa